Tingave tichida kana kwete, vaizdas nechinzvimbo chakanyoreswa kumakiti ako ndicho chinodiwa.
Kana i usina imte chete, kana kuti unoda kungotungamira zvishoma pane mazita echirongwa, ipapo ramba uchiverenga. Tichagovera tsanangudzo dzekutenga nekunyora ruzivo rutsva rweVatangi!
1 „Chii chinonzi“ domenas?
2 Domeno vardas Mazano
3 Geriausias domenų vardų generatorius
3.3 3 – Zitos stotis
3.6 6- „Shandisa“ verslo vardų generatorius
4 Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Zita iš naujo domeną?
6 Nzvimbo Yakanakisisa Yokutenga domenas
6.1 „Mishumo“: „Cloudflare“ „seChita“ domenų registratorius
7.4 1- „Kušhandisa“ naujausi domenų pardavimai
7.5 2–Kushandisa internetiniai domenų įvertinimo įrankiai
8 Garažo skydelis, kurį galite matyti iš naujo, kaip tik jūs
„Chii chinonzi“ domenas?
Apo yra vienintelis žiniatinklio lankytojų tinklas, bet ne vaizduojamas nezita renzvimbo. Asi chii chinonzi heck iri zita rechizinda?
„Chaizvoizvo tambo yemashoko anozivikanwa ayo“, „kana akaiswa mubhapiti“, „anodzorera mushandisi kune we server“ jako IP.
„Unoona“, „kana webhusaiti ikasikwa“, „inowanzouya nekero yakasiyana inozivikanwa seWerld“ vardų vardų serveriai (DNS) iyo inowanzoita seyiyi:
Izvozvo zvakaoma chaizvo kubata nepamusoro uye kunyora. Ichi ndicho chikonzero zita rakasiyana-siyana papuola risiri nyore kune vashandisi vanoyeuka uye vanyore.
Domeno vardas Mazano
Jūsų domeno vardas yra jūsų tapatybė. Ndizvo vanhu vanokuwana iwe, mazita avatengi vanopfuura kune vamwe.
Chengetai zviduku uye zviri nyore kuyeuka (nzvimbo yedu "Atskleista žiniatinklio prieglobos paslaptis" muenzaniso wakaipa!)
Jungtinės Amerikos Valstijos – „YouTube“, „YouTube“, „Google“, „LinkedIn“
Nyora uye uverenge kakawanda usati watenga (muenzaniso – chenjerera zvikuru kana zita rako rebhizimisi riri "„Dickson Web“")
Reikšmingas raktinis žodis *
* „Ongorora“: Iwe haudi raktažodis muzita rako rezita kuti ugoita zvakanaka paGoogle mazuva ano. Asi iyo pfungwa yakanaka jekuisa zita rako rezita rakatendedza musimboti wepazita rako sezvo ichapa vashanyi vekutanga nguva yekukurumidza zano rekuti webhusaiti yako iri nezvei.
Geriausias domenų vardų generatorius
Heano mazita mashoma mazita e generatorius kuti akubatsire kugadzirisa mazita ezita rezita.
Domainr ichawedzera chimwe chinhu chakasiyana-siyana chekugadzirisa kune zita rako rechirongwa nekupa mazano ekuwedzera. Kušaniris: Domainr.com
Vashandi veShokooid vanoita kuti vape mazita asina kuwanikwa kana kupinda mazwi makuru kuti vashandise semudzi. Kušaniris: Wordoid.com
3 – Zitos stotis
„Zita Station“ rinobudisa mazita asina kutarisana uye uye asina šaknies raktas. Kušaniris: „NameStation.com“
Dot-o-mator isiri nyore kushandisa iyo inosanganisira mazwi maviri kuumba mazita matsva. Kušaniris: Dotomator.com
Tsvakiridzo yeSain Domain isiri nyore kushandisa-injinjini yekutsvaga yekuwana mazita emadzinza aripo. Icho chishandiso chinobatsira vashandi kuwana mazita emadunhu mazita kuburikidza nepakati pakutsvaga mutsara pamwe nemamwe mazita anowanzowanikwa mumazita emumunda. „Icho chishandiso chinowanikwa neActattic“ („kambani iri shure kwe WordPress.com“) mu2013. Kušaniris: „LeanDomainSearch.com“
6- „Shandisa“ verslo vardų generatorius
Parduotuvė „shop“ Vardas Vardas Generatorius inokubatsira kuti uite mazita ebhizimisi uye chengetedza zita rekuwanikwa. Tanga nekusarudza izwi rinokosha raunoda kuti nzvimbo yako iise, uye iwe uchawana mazana emazano. Kušaniris: „Shopify“ verslo vardų generatorius.
Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Zita iš naujo domeną?
Chirongwa chekunyora uye yekuvandudza mari inodhura zvakanyanya kubva pakuwedzera kwayo (inozivikanwa seTLD). „Mumuenzaniso uyu ne NameCheap“ .com domeno inodura yra 10,98 USD / gore uye inovandudza pamutengo mumwe chete. „Kune rumwe rutivi“, „nzvimbo ye.store“ inodhura 4,99 USD / gore kunyoresa asi 48,88 USD / gore kuti uvandudze.
Sakai, naudokite waenderera mberi uye uzviwanire zita idzva rezita rechirongwa, ndine chokwadi kuti pane mubvunzo wakanaka chaizvo waunoda kubvunza. Uye iyo ndeyokuti:
Zvinosuruvarisa, pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kugadzirisa mutengo wezita reimba. „Zvimwe zvezvikonzero izvi zvinogona“ vaizdas:
„Kuwedzerwa kwezita remudunhu“ („muenzaniso“: .com, .shop., .E)
Kunyange zvazvo zvakaoma kupfuurira pasi kunyanya kuti zita rezita rinogona kudhura sei, iwe unogona kutarisira kubhadhara chero kupi zvako pakati pe $ 2 kusvika ku $ 20 pagore, zvichienderana nehotera chero ipi zvayo kana kuti mahwende.
„Murairo wakanaka wegumbo ndeyekuti itsvaer“ domenų plėtiniai (.global, .design., .Cheap) inogona kunge yakadhura zvishoma kupfuura yakawanda domenų plėtiniai (.com, .net), sezvo ivo vachangobva kuiswa pamusika .
„Zano # 1“ – mes nebenaudojame „yemahara“ domeno, kuriame pateikiame „vamzdynų“ kūrimo procesą, „InMotion Hostingas“ yra pagrindinis kompiuteris. Kukwezva vatengi vatsva, mamwe makambani anotambira anopa mahara mahara nzvimbo kune yavo yekutanga nguva vatengi. Kana uri kuronga webhusaiti kekutanga, unogona kuchengetedza imwe mari nekutambira neaya mawebhusayithi.
„Zano“ Nr. 2 – „NameCheap inomhanya kwakasarudzika mwedzi wega wega“ – „Unogona kutarisa yavo saiti peji usati watenga idzva“ domenas.
Kune zvakanakira uye zvakaipira kunzira mbiri idzi asi pakupedzisira, zviri kwauri kuti iwe unoda here kubhadhara kune anodhura asi achizivikanwa maadha
„Sezvambotaurwa kare“ – „Zita rakanaka remasimba rinogona“ vaizdas chigadziro chinokonzera kana kuputsa marashi yako, sako sarudza imwe nekuchenjera.
Iye zvino zvawakasarudza pane zita rinoremekedzwa, ndiyo nguva yekuongorora kana zita redaire raunoda riripo kana kuti kwete.
Kuongorora kana zita rezita rekuwanikwa kuri naujore. Iwe unogona kuita tsvaga kutsvaga neimwe yezita regrriter domenas; kana, shandisa Whois tsvakurudzo dzinoita kuti uone kana zita rako rezita rako riripo kana kuti ratorwa.
Kana nzvimbo yezita raunoda isingawanikwi, edza kuona kana zvakakosha zvakasiyana zvinowanikwa pane.
Nyoresa domeno kana iripo.
Izvi zvinoreva mashoko akadai seameri yako yekombiyuta, kero yepaimba, nhamba yefoni, nezvimwewo, ichawanikwa nuotraukųhu.
Kana iwe usingadi vaizdas nemashoko ako ega ari pachena, unogona kusarudza kubvisa zvinyorwa chako pachivande kuitira kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruchengetedzwe kubva kuvanhu vose.
Mari inoshandiswa kushandiswa kwebasa rekunyora yega yega inogona kusiyana asi kazhinji, iyo inotangira kubva $ $ $ – 10 $ pagore.
Nzvimbo Yakanakisisa Yokutenga domenas
Aš unogona domeno kana iripo. Asi, unoita sei chaizvo?
Nzira yakanakisisa ndeyokuenda kune imwe nzvimbo yechirongwa chekubatsira. „Inzvimbo regsitrar ichakubvumira iwe kunyoresa zita rako“ redaktorius kana kuti kuburikidza nezvibvumirano zvegore negore kana bvumirano refu.
Domenų registratoriai, besinaudojantys „WHOIS“ privatumu
123 reg £ 11,99 11,99 svarų sterlingų £ 4,99 / gore
Domenas.com 9,99 USD / gore 10,99 USD / gore –
Gandi 12,54 euro / gore 16,50 € / gore –
Varyk Tėti 12,17 USD / gore 12,17 USD / gore 7,99 USD / gore
kuyengerera 12,99 USD / gore 15,49 USD / gore Laisvas
Zita rakaderera 10,69 USD / gore 12,88 USD / gore Laisvas
Tinklo sprendimai 34,99 USD / gore 32,99 USD / gore 9,99 USD / gore
Domenų domenų registratorius.
Dzimba dzinodhura dzinogona kusvika kusvika kune zviuru zvemadhora asi gryure mokudaro, mari yekuvandudza inonyatsodanwa (10–15 USD pagore).
„Mishumo“: „Cloudflare“ „seChita“ domenų registratorius
Cloudflare vaudza mazita avo mazita ehurumende kubhadhara mabasa ane zero mari yekubhadhara uye inopa mitengo yakawanda yeTLD dzakadai se .com, .net, .io ,, etc. purogiramu.
Zvinokwanisika čia panaši zita rezita rega zvakananga kubva kune webhusaiti inovaka kana kukamba makambani?
Vavaki vemawebsite vanoverengeka vanopa mano ekutenga chirongwa gryure mekunge iwe wakasika nzvimbo panzvimbo yavo.
Vamwe vevakanakisisa vekuvaka webusaiti nhasi, zvakadai Wix or Weebly, ichakupa rusununguko rwemasikirwo emazita egore kana iwe ukanyorera kumapurogiramu avo egore negore.
Mari yekuvandudza, zvisinei, inogona kusiyana zvichienderana nespamberi pachayo neWix kupa 14,95 USD pagore kuti ivandudze apo Weebly inodhura zvishoma kune 19,95 USD pagore.
Kunyangwe zvingangodaro zvinyorwa zvishoma kana zvichienzanisa nekunyora ruzivo iwe pachako, kubatsirwa kwekutenga zita rekuda mazita kuburikidza newebsite yevashandisi ndeyokuti iwe unogona nyore kubatanidza reba webausa.
Ko kana iwe uchida panaga chinzvimbo chiri kutotanga kushanda pane?
Iwe unogona kusarudza panaga mabhizinesi anoshingaira uye kuendesa unhu huno kuburikidza nemasipirwo akadai sezita rezita rekutsvaga.
Zita rezita rinokurudzira hutori hwemasimba echitatu-ega anobatsira mukutengesa-kaipgesa mazita emumataini mazita paIndaneti. Aya masayiti anopa nzira yakachengeteka yokuti vatengi vatenge mazita ekutonga kubva kune vatengesi vanoda kuregera kubva mazita avo.
Panevezys hwemasimangita emazita deponavimo mazano anowanikwa, asi apa pane zvishoma kuti i unogona kutarisa: Escrow.com, Sedo, uye BuyDomains.
„Nyora rekodha panel imwe nzvimbo yebasa rekutsvaga“, uye sarudza maitiro echitengeserano pakati pako nemutengesi, iyo inosanganisira zita rezita (s) uye mutengo wekutengesa.
Kana ukasarudza pamari yacho, aš vienintelis kubhadhara kwako (kuburikidza nematare, kadhi rechikwereti kana chero imwe nzira) kune kambani yekuenda.
Aš nekalbu, kad pamėgdžioji nekambani yekutsvaga kuti umiridzi wezita rezita redu wakatumirwa kwauri. Shandisa NDIANI arba WHSR žiniatinklio priegloba Šnipas Kuti Uone kana Muridzi wemuzinda wacho Avandudzwa kana Kwete.
Sangano rinokurudzira rinozoona kuti zita redaire rakashandurwa uye ivo vachazopa mari kune mutengesi, kudedza mari yavo. (Unogona kusarudza zvisati zvaitika iyo imwe yenyika inobhadhara mari kana kuti yakaparadzana nepakati.)
Paunenge uchitsvaga zita rekugara rine mazita, iro rinowanzowanika pamusangano wemarkmarket, vatengesi vega, uye vendesa – iwe uchacherechedza kuti kukosha kwavo kunogona kumira kupi kubva kune madhora mashomanwe zombie kvino kumusoro.
Nzvimbo iyo iripo yakatarisa inowana mutengo wayo inogona kusarudzwa nenhamba yezvinhu zvakadai sekureba, mutauro, mamiriro, uye mazita evanhu. Hapana imwe nzira imte chete iyo inogona kukupa mutengo wakakwana wokubvunza. Kune nzira, zvisinei, kuti ndikupe ballpark kukosha kwezita rezita uye zvinoda zvishoma kutsvakurudza pane yako.
1- „Kušhandisa“ naujausi domenų pardavimai
Murairo wakanaka wegunwe kuti unzwisise kuti maitiro anokoshesa ndezvekutarisa panašgeswa kwechangobva kuitwa. Kutarisa panagesa kwemazuva ano kunogona kukupa pfungwa yekuti madhii ari panagwa uye kuti ndeapi.
„DNJournal“ paskelbia domeno domeno ataskaitos ataskaitą „izvo zvavanogara vachidzokorora uye mairi“, „vanonyora mazita mazita avo achangobva patinkageswa kubva kune“. Paunotarisa kuburikidza, tarisa kune mazita echirongwa chemashoko, urefu, uye zvimwe zvakakosheswa kuti uwane pfungwa yekuti zita rekudoma rakakosha sei.
„Rakabudiswa paDN Journal“ domenų pardavimo ataskaita (2018 m. Gegužė)
„YaDN Journal“ domeno pardavimo ataskaitos ekrano kopija.
2–Kushandisa internetiniai domenų įvertinimo įrankiai
„Mamwe mashomanana aunogona kutarisa ndeawo Estibot“, „WebsiteOutlook“, URL vertinimas.
Aya masayiti anoona kukosha kwemasimusi achishandisa SEO-zvine chokuita nezvinhu zvakadai sekutsvaga, atslēgvārdai, Alexa rank, mwedzi wekutsvaga, nhamba yekutsvaga, uye mari inoshandiswa pane imwechete.
Zvakare, hapana marongerwo emitengo ekutenga zita rezita uye iwe unogona kutarisira kuti vashandurwe kakawanda. Kana iwe uchida pfungwa yakawanda yezita rematunhu mazita, unogona kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai Afternic arba Tenga Mazita kuti uwane manzwiro emari.
Garažo skydelis, kurį galite matyti iš naujo, kaip tik jūs
Zvingave zviri kuburikidza newebsite kana kuti domain domain registrator, kupiwa zita rezita rinofanira kuva chinhu chokutanga chamunopedza musati maenda kurarama. Kana uchinge watora izvozvo pasi, inguva yekufungisisa achivaka svetainė yako.
* Kuwedzeredzwa : Chokwadi chakaongororwa uye itsva indasitiri zvitauro zvakawedzerwa. Yakanga yakadzoka mu 1985